Xukuumadda Somaliland Oo ka Hadashay dagaalkii Galabta iyo khasaarihii dagaalkaas ka dhashay | FooreNews
Home wararka Xukuumadda Somaliland Oo ka Hadashay dagaalkii Galabta iyo khasaarihii dagaalkaas ka dhashay
fooreJan 27, 2012wararka0
Buuhoodle (Foore)-Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyi-gelinta Somaliland Md. Faysal Cali Sh. Maxamed, ayaa ka hadlay dagaalkii galabta ciidamadda qaranka iyo maleeshiyo nabad diid ah ku dhex maray deegaanka Sool-joogta oo ku yaala duleedka Magaalada Buuhoodle.
Agaasimaha Guud waxa uu sheegay inay ciidanka qaranku ay dhirbaaxo kulul ku dhufteen maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo uu ku eedeeyay inay soo direen wax uu ugu yeedhay kooxdii fidmo waleyaasha ahaa ee shirka ku qabsaday dhawaan degmada Taleex ee gobolka Sool.
Agaasimuhu wuxuu sheegay in ciidanka qaranku ay baacsadeen isla markaana dib u celiyeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo uu carabka ku dhuftay in khasaare weyn loogu geystay dagaalkii galabta oo socday 3:30-kii galabnimo ilaa makhribkii caawa.
Agaasimaha guud waxa uu sheegay inaanay nabadgelyada iyo wada jirka dalka waxba u dhimi karin koox qurbo-joog ah oo doonaya inay qas geliyaan xasiloonida shacbigoodu ku naaloonayo.
Faysal Cali Sheekh waxa uu ciidanka qaranka ku bogaadiyay guusha ay ka soo hooyeen dagaalkan iyo sida uu xusay waajibaadka culus ee ay dalkooda u hayaan.
Dhinaca kale, ilo-wareedyo xog ogaal ah oo shabakada wararka ee Somaliland.Org, ka heshay magaalada Buuhoodle iyo jiidii dagaalku ka dhacay ayaa dhamaantood xaqiijiyay in dhimashada kooxdii weerarka soo qaaday ay gaadhayso sodon qof, halka dhawr iyo toban kalena ka dhaawacmeen.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in ciidanka qaranka ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan ilaa shan askari kuwaasi oo lagu dawaynayo Magaalada Qori-lugud.
Siday ilo-wareedyadaasi sheegayaan waxa kooxdii weerarka soo qaaday laga gubay ilaa laba baabuur oo nooca tiknikada ah.
Previous PostBaaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada Qaranka Next PostMadaxwayne Siilanyo: “Shirka Ingiriiska marti-qaadkiisii wuu na soo gaadhay, waxase aan ku jirnaa wada tashiyo”